မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဆန် တင်ပို့သော ချင်းအမျိုးသမီးတဦးဖမ်းဆီး - Khonumthung Media Group
You are at:Home»Headline»မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဆန် တင်ပို့သော ချင်းအမျိုးသမီးတဦးဖမ်းဆီး
By admin on	 April 17, 2014 Headline
ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီ ၁၂ ရက်နေ့က မီဇိုရမ်ပြည်နယ် Sangau ကျေးရွာမှ မြန်နာနိုင်ငံသို့ တင်ပို့မည့် ဆန် ၂၅ နဲ့အတူ ချင်းအမျိုးသမီးတဦးကို Young Lai Association (YLA) မှ ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ ဆန် အိတ်များကို မြန်မာနိုင်ငံ ချင်းပြည်နယ် Sialam ရွာရှိ Hlawnbawri မှ မီဇိုရမ်ပြည်နယ် Sangau ကျေးရွာမှ ဆန် ၂၅ အိတ် ဆန်တအိတ်ကို ရှုပီး ၇၀၀၊ ၉၀၀၊ ၁၀၀၀ နှုန်းစဖြင့် ၀ယ်ယူခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း မီဇီုရမ်ပြည်နယ်မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဆန်၊ စပါး မကြာခဏတင်သွင်းခဲ့တာကြောင့် မီဇိုရမ်ပြည်နယ် ရှိ Sangau ကျေးရွာတွင် ဆန်၊ စပါး နည်းပါးလာတာကြောင့် အခုလို YLA မှ သတင်းရရှိချက်အရ လိုက်လံ စစ်ဆေးခဲ့ရာ အခုလို့ ဖမ်းဆီးခဲ့ရသည်ဟု The Aizawl Post သတင်းစာတွင် ဖော်ပြပါသည်။
ယင်းဖမ်းဆီးထားသော ဆန်များဟာ ဒေသခံလူထုထံမှ ၀ယ်ယူသော ဆန်များဖြစ်ကြောင်း နှင့် အခုလို ဖမ်းဆီးတော့ ပိုင်ရှင်များထံ ပြန်လည်အပ်နှံခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
Lian Uk on April 17, 2014 1:10 pm
I think that the lady who has been arrested for trying to transport rice to Khuachhak Lairam from khua thlang Lairam isdnot in the leastacrime. The rice she bought or got from relatives in Khuathlang Lairam asadonation for people in starvation inthe Khuachhak Lairam should be released with her rice bags in the name of Jesus Christ as soon as possible.
We learn nolaw to ban rice transportation from Mizoram to Chin State.Lawngtlai District isarelative neighbour district oa the Chin State annd it is tradition to give and take inter relative distru=ict with the Chin State Lairam. and there can not exist here any criminal arrest in such tradition inter relative assistence..May LMG in Lawngtlai are requested to braod cast in the LMG media their findings.Thanks. Lnk.